chomarwin's Page - Myanmar Network
Top of Formရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုင်ရာ လူငယ်တွေ့ဆုံပွဲ (Yangon Youth Forum) ၏ လိုဂိုအတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း နေ့စွဲ။ ဇွန်လ -၅ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လူငယ့်အခွင့်အရေး၊…Continue
Started this discussion. Last reply by chomarwin Jun 17, 2013.9Replies 22 Likes
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုင်ရာ လူငယ်တွေ့ဆုံပွဲ (Yangon Youth Forum ) ကျင်းပမည်။ အရှိန်အဟုန်မြင့်မားစွာဖြင့် အံ့မခန်းတိုးတက်လျက်ရှိသော ကမ္ဘာ.ရွာခေတ် ကြီးတွင် နောက်ကျမကျန်ရစ်စေရန်…Continue
Started this discussion. Last reply by Aunghtoolynn Sep 23, 2012. 11 Replies 36 Likes
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လူငယ်စကားဝိုင်းတစ်ရပ် ကျင်းပမည် ။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လူငယ်တွေ့ဆုံပွဲ (Myanmar Youth Forum) ဖြစ်မြောက်ရေး ဆွေးနွေးပွဲကို ၁၈၊၈၊၂၀၁၂ (စနေနေ့) တွင် ရန်ကုန်မြို့၊…Continue
Started this discussion. Last reply by Tina Sep 6, 2012.9Replies7Likes
လောကမှာငွေရှိရင် ဘာမဆိုဖြစ်တယ်လို့ ထင်နေကြသူတွေအတွက်… အောက်ကအချက်(၂၀)ကို ဖတ်ကြည့်ပေးပါ 1. ပိုက်ဆံပေးပြီး အစားအသောက်တွေ (Food) ကို ဝယ်လို့ရလိမ့်မယ်၊ စားချင်စိတ် (Appetite) ကို ဝယ်လို့မရဘူး။ 2.…Continue
Pink Ribbon From မိုးမိုး
HI!everyone! My name is Cho Mar Win.But most of my friends and my family call me only "Cho Mar".I graduated with 'Computer Science " from" Yangon Computer University" (UCSY). .And later, I attended two training courses at Myanmar Computer Training Center .Fortunately, I haveagood chance to meet with excellent teachers at MCC who guided me the way to beagood citizen.They are the great teachers who inspired me to becomeateacher.Now,I am working as an ICT teacher at NIEC(Yangon).Beingateacher, I believed that teaching isaway of learning also.So,everyday I am trying to learn from every people from different society even from my students.They are my great inspirations.Not only to follow today technology's trend ,but also to help our society especially to create green environment, I organized the event in every year named "Environment ICT project".We created all ICT projects together and planting so many green trees to create green environment.To help my society effectively is my biggest ambition.
At 0:23 on October 10, 2013, Zaw Win said…
အင်္ဂလိပ်စာကို အချိန်တိုတိုနဲ့ အမြန်တတ်မြောက်စေဘို့
At 6:48pm on December 14, 2012, မိုးမိုး gave chomarwinagift…
At 16:47 on December 2, 2011, myokoko said…
အခုလို အသိပညာလေးတွေမျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချင်ဗျာ။နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်လည်း အခုလို မျှဝေနိုင်ပါစေ။
At 0:00 on September 10, 2011, san lin said…
သမီး အသုံးပြုတဲ့ dropbox နဲ့ ဖိုင်တွေကို ရှယ်ပေးတာကို သိခြင်ပါတယ်။ ဦးစံ မှာ dropbox တစ်ခု
လုပ်ထားပေမဲ့ ဖိုင် အချို့ ကို သမီးပေးသလိုမျိုး address ပေးပြီး ဒီမှာ download လုပ်ကြပါလို့
ဦးစံရဲ့ email က sanlinmtla@gmail.com ပါ ။
At 10:08 on May 12, 2011,
At 13:02 on April 15, 2011, Mr.ThaungHtutMyat said…
Capial မှာ IT Department မှာလုပ်နေပါတယ်။
At 22:06 on April 14, 2011, Zaw Min Tun said…
Congratulation for your lucky . Nice to meet you . You can contact with me . For ICT network technology . My G mail account is silentcontrol1990@gmail.com. I hope your G mail account invite time. Good Bye.
At 11:56 on April 7, 2011, Saw Baw Mu said…
Whatalucky lady you are! Haveanice Long holiday!
At 14:27 on April 6, 2011, MOE ZAW OO said…
At 16:15 on April 5, 2011, Soe Thiha said…
Congratulation Cho Mar Win.......!!!